Psa 25 | Mal1865 | STEP | Nataon'i Davida. Aminao, Jehovah ô, no anandratako ny fanahiko.
Salamo abidy. Fangatahana fiarovanana sy fitarihana
1 Nataon'i Davida. Aminao, Jehovah ô, no anandratako ny fanahiko. 2 Andriamanitro ô, Hianao no itokiako, aoka tsy ho menatra aho; aoka tsy hifalian'ny fahavaloko aho. 3 Eny, tsy hisy ho menatra izay rehetra miandry Anao; fa izay mivadika foana no ho menatra.
4 Ampahafantaro ny lalanao aho, Jehovah ô; ampianaro ny sitrakao aho. 5 Tariho amin'ny fahamarinanao aho, ka ampianaro; fa Hianao no Andriamanitry ny famonjena ahy; Hianao no andrasako mandritra ny andro. 6 Tsarovy ny antranao sy ny indrafonao, Jehovah ô, fa hatrizay hatrizay ireny. 7 Aza ny fahotan'ny fahatanorako, na ny ratsy nataoko, no tsarovanao; fa aoka ho araka ny famindram-ponao no hahatsiarovanao ahy, noho ny fahasoavanao Jehovah ô,
8 Tsara sy mahitsy Jehovah, ka izany no ampianarany ny mpanota ny lalana. 9 Mitarika ny mpandefitra amin'ny marina Izy, ary mampianatra ny mpandefitra ny lalany. 10 Ny lalan'i Jehovah rehetra dia famindram-po sy fahamarinana amin'izay mitandrina ny fanekeny sy ny teni-vavolombelony. 11 Noho ny anaranao, Jehovah ô, dia mamelà ny heloko, fa lehibe izany. 12 Iza no lehilahy matahotra an'i Jehovah? Izy no hampianariny izay lalana tokony hofidiny. 13 Ny fanahiny hitoetra amin'ny soa; ary ny taranany handova ny tany. 14 Ny fisainan'i Jehovah asehony amin'izay matahotra Azy, ary ny fanekeny no hampahafantariny azy. 15 Ny masoko mijery an'i Jehovah mandrakariva; fa Izy no nanafaka ny tongotro tamin'ny fandrika harato.
16 Todiho aho, ka amindrao fo, fa irery aho ka mahantra. 17 Ny fahorian'ny foko efa mihalehibe; afaho amin'ny fahatereko aho. 18 Jereo ny fahoriako sy ny mavesatra amiko, ka mamelà ny fahotako rehetra. 19 Jereo ny fahavaloko, fa maro izy; ary loza ny fankahalàny ahy. 20 Arovy ny fanahiko, ka vonjeo aho; aoka tsy ho menatra aho, fa mialoka aminao. 21 Aoka ny tsi-fisian-tsiny sy ny fahitsiana no hiaro ahy; fa miandry Anao aho. 22 Andriamanitra ô, afaho ny Isiraely, amin'ny fahoriany rehetra.